VTKLP စီးရီးတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သည်ပြောင်းဖြင့်အစာကျွေးနိုင်သည်,ဂျုံ ,ဆန်, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး, မြေပဲခွံ, ဆန်ခွံ, ကဗျာ, ဝါဂွမ်းအမျိုးအနွယ်ကိုထည်, ဂျုံ - ကောက်ရိုး, နေကြာစေ့အခွံ,ဝါဂွမ်း, ပေါင်းပင်, etc ။ ဒီကြက်ဘဲအစာတောင့်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်, သငျသညျအဘို့အစာကျွေးပါစေဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့် tractor ။ မည်သည့်တိရစ္ဆာန်မျိုး, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်၏, ယင်းတွင်ကြက်အစာကျွေးသည့်အတောင့်ကြိတ်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အစာထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံး၏အဓိကနေရာမှပါဝင်သည်။. တကယ်တော့, ကြက်ဘဲအစာတောင့်ကြိတ်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဒြပ်စင်များစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်, ကြက်ဘဲအစာကြိတ်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ညီမျှသည်ဟုလူအများစုကထင်ကြသည်, ထို့ကြောင့်ကြက်အစာကြိတ်စက်ကိုသူတို့ဝယ်ယူသောအခါကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်စျေးပေါသောဈေးနှုန်းကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ.
1). လုပ်ငန်းများ၌ကြက်သားအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်, ဘဲ, ငါး, cattle.pig, ငှက်များ, ခွေး, စသည်တို့, အရောအနှောအစာကျွေးခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်သည်.
2). ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းဖူးအစာတောင့်စက်, ကျယ်ပြန့်အလိုက်အထိုက်နေတတ်, သေးငယ်တဲ့areaရိယာဖုံးလွှမ်း, ဆူညံသံ. မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်စားသုံးမှုတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ကြိတ်စက်.
3) .အမှုန့်အစာကျွေး, မြက်မုန့်ညက်လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်အရည်နှင့်အတူမလိုအပ်ပါဘူး, ထို့နောက် granulation များအတွက်အောင်နိုင်ပါသည်. ပစ္စည်းများ၏အစိုဓာတ်ကိုမီ granulating စပါးအစာကျွေးခြင်း၏အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာဒါအခြေခံ, သိုလှောင်မှုကိုပိုမိုအထောက်အကူပြု.
4). အပူပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့မွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းတောင့်ကြိတ်စက်, အစာတောင့်များထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မာကျောသည်, ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်, အတွင်းပိုင်းကုသ, တိရစ္ဆာန်ရဲ့အစာခြေခြင်းနှင့်အာဟာရ၏စုပ်ယူတိုးတက်စေနိုင်သည်.